Wararka ka imanaya magaalada Baydhaba ayaa sheegaya in maanta halkaas lagu xiray Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Xildhibaanad Xanifa Ibrahim Xabsade oo ah mudane Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kasoo gasho magaalada Baydhabo ayaa VOA-da u xaqiijisay in Abu Mansuur ay madaxtooyada Baydhabo ka xireen ciidamo Itoobiyaan ah, kaddib marki uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur galbeed.
Xariga Abu Mansuur ayay ku eedeysay in ay ka danbeyso Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wariyaheenna magaalada Baydhabo ayaa kusoo warramaya in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen sideed ruux, 10 kalana ay dhaawacyo soo gaareen.
Wararka ayaa sheegaya in wali laga maqlayo gudaha Baydhabo dhawaqa rasaas teel teel ah, sidoo kalana xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan.
Xildhibaan Maxamed Isxaq Cusman Fanax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ay goor dhawayd Mukhtaar Roobow diyaarad geysay magaalada Muqdisho, loona gudbiyay xarunta nabad sugidda ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagu xiray.
Dhanka kalana, war saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu faafiyay warbaahinta Dowladda ayaa lagu xaqiijiyay xariga Abu Mansuur.
Dowladda Federaalka waxay sheegtay in xariga Abu Mansuur ay u cuksatay, kadib markii uu jebiyey laba qodob oo horey lagula heshiiyey, kuwaas oo kala ahaa:-
1 - In Mukhtaar Roobow uu ka tanaasulo fikirki xagjirnimada, isla markaana uu si cad oo aan qarsoodi lahayn u cambaareeyo fikirka xag-jirka ah, isla markaana taageero dowladda Federaalka Soomaliya.
2 - In aanu ku talaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo minjo-xaabin ka dhan ah dowladda Federaalka Soomaliyeed iyo Dowlad Goboleedyadaba xubnaha ka ah.
Mukhtar Roobow ayaa isu dhiibay Dowladda Soomaaliya bishi August ee sannadki 2017. Bishii June ee isla sannadkaas ayay dowladda Mareykanka ka qaaday 5 milyan oo doollarka oo saarneyd madaxiisa. Abu Mansuur ayaa ka mid ahaa aas-aasayaashii ururka Al-Shabab oo uu ka noqday ku xigeenka kooxdani.